Waxyaabaha 3, maareeye hawleed qurux badan laakiin aan dhammaystirnayn | Wararka IPhone
Waa doodda weligeed ah ee codsiyada: quruxda iyo shaqeynta. Waxaa jira kuwa doorbida codsiyada bilicsanaantaHalka ay jiraan dad kale oo ahmiyada koowaad siiya barnaamijyada shaqeynaya xitaa hadii naqshadeynta aysan aheyn mid soo jiidasho leh. Xaaladdayda, waxaan ahay mid ka mid ah kuwa u maleynaya in wanaaggu ku jiro bartamaha (illaa aan ka wada heli karno dhammaantood), ujeeddada maqaalkani waxay noqon doontaa in la arko haddii Waxyaabaha 3, oo gabi ahaanba qurux badan, ay sidoo kale bixiso waxqabadka waxaan fileynaa.
2 Haa laakiin maya
Kuweena ku sugnaa dunida Apple sanadaha qaar, Waxyaabo maahan wax cusub. Waxay nala joogtay sannado badan labada macOS iyo iOS, iyo Code Cultured wuxuu had iyo jeer ahaa tusaale qumman marka laga hadlayo sheegida horumariyayaal yaqaanay sida loola jaanqaado waqtiyada cusub.
Iyada oo la 3 version badan, war badan ayaa imanaya. Muuqaalka ugu caansan uguna caansan dhammaan (iyo midka ay suuragal u tahay inay ku caddeeyaan inay tahay casriyayn la bixiyay) ayaa ah naqshad cusub. Animations cusub, isdhexgalka cusub, astaamaha cusub, qaabeynta cusub iyo runtii, wax walba oo ku hagaagaya wixii hore, waxba kuma dhicin. Waxay nooga soo sheegaan soo-saaraha inay shan sano ku jirtay foornada oo, markaan aragno feejignaanta faahfaahinta, waan rumaysanahay.
Haa laakiin maya
Waxaa kamid ah qodobada ugu wanaagsan ee Waxyaabaha 3 Waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo in is dhexgalka adeegyada jadwalka uu yahay mid aad u wanaagsan, sidoo kale wareegyada horumarka (taas oo noo oggolaaneysa inaan si weyn u aragno waxa naga haray si aan u dhammaystirno mashruuc) iyo badhanka cusub ee "+" oo matalaya horumar la arki karo marka ay timaaddo hagaajinta xilliyada si hawl loogu daro.
Dhinaca hoose, waxaa jira laba shay oo aasaasi ah in GTD wanaagsan aragtidayda iyo in Waxyaabaha 3 aysan wali bixin, inkasta oo ay macquul tahay inay ku yimaadaan cusbooneysiin. Ta hore waa tarjumaadda caqliga badan ee qoraalka, gaar ahaanna ku anfacaysa taariikhaha iyo xilliyada; tan labaadna waa suurtogalnimada abuurista hawlo soo noqnoqda, wax ficil ahaanteenna u wada baahan oo aan si aan macquul ahayn ugu jirin qaybtan saddexaad.
Intaas oo dhan, waxaan ka hadleynaa codsi heer sare ah, gaar ahaan xagga qaabeynta iyo sahlanaanta isticmaalka. Faahfaahinta qaar ayaa maqan, Taasina waxay ka dhigeysaa in badan oo idinka mid ah laga yaabo inaad ka fikirto iibsiga, wax caadi ah oo leh waxyaabo kale oo qiimo jaban ama xitaa bilaash ku leh App Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Waxyaabaha 3, maareeyaha hawsha oo qurux badan laakiin aan dhammaystirnayn
Hawlaha soo noqnoqda ayaa ka jira Waxyaabaha 3 ... si fiican u hubso sababta oo ah inaad qalad samaysay
Sax, dhowr ayaan hayaa
Ka jawaab Masiix
Ma fahmin qodobkan. Hawlaha soo noqnoqda ayaa horeyba uga jira Waxyaabaha 3 sidoo kale luqadda dabiiciga ahi waa sidaas.
Hawlaha soo noqnoqda Dhib malahan waxa 3, waxaan hayaa dhowr
Barnaamijkani waa mid qurux badan, laakiin dhibaato weyn oo aan arko ayaa ah wax aan macquul aheyn oo lagu arki karo liiskaaga howlahaaga Windows. Xafiiska dhexdiisa fursad uma lihi inaan ku arko waana meesha aan aad ugu baahan ahay.
Xakamaynta Remote, Qoraal iyo codsiyo badan oo bilaash ah hadda oo keliya
ARKit xaqiiqda la kordhiyay ee Apple ayaa wacdaro ka muuqata Khariidadaha iyo hagidda